> Resource > Mac > Sidee inuu ka soo kabsado Mac-diridda File
Sidee ayaan u soo kaban karto, Lost-diridda Mac?
Waxaan ka shaqeeyay bandhig-diridda 4 saacadood, oo anna waan badbaadi on my Macbook Air. Waxay ahayd dabayaaqadii Habeenkii iyo anigu kama aan aaminsanahay in aan mar dambe loo tirtiray dhowr daqiiqo. Nasiib darro Anigu ma synced la iCloud iyo ma aha in qashinka ma. Sidaas dhibaato waa in weli waxaan soo kaban karaa badiyay file-diridda? Mahad badan!
Caadi ahaan, waxaad dib u soo ceshano kartaa file-diridda lumay ka iCloud. Haddii aan la synced in aad iCloud weli, uma baahnid in aad si aad u welwelsan aad. Waxa aanu xitaa micno ma markii aad u weelna Trash. Taabanaysa isu-diridda ayaa lumay weli waa ku aad Mac iyo Kabcada_ ka dhigaysa in ay geli karin. Ka hor waxaa overwritten by xog cusub oo ku saabsan Mac, waxaad weli fursad inay u soo celiso.
Wondershare Data Recovery for Mac waa mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee aad ka bogsato Mac files taabanaysa isu-diridda. Waa awoodaan inay ka bogsadaan lumay, tirtiray, formatted iyo kharribeen files taabanaysa isu-diridda ka Mac hab sahlan. Waxaa si buuxda la jaan qaada oo dhan kombiyuutarada Mac, oo ay ku jiraan Macbook taxane, iMac, Mac Mac Mini iyo Pro. Plus, codsigan u qabata Mac kabashada taabanaysa isu-diridda in hab sahlan in la isticmaalo oo khatar la'aan.
Download utility inuu ka soo kabsado Mac files taabanaysa isu-diridda hadda.
Kabsado-diridda Mac 3 Talaabooyinka
Wax First hore: aad si fiican u joojin lahaa adiga oo isticmaaleya isticmaale Mac ka dib khudbad ka lumay. Haddii kale waxa laga yaabaa in la overwritten karaa iyadoo xogta cusub ku Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si loo soo celiyo diridda Mac
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo ordaya codsiga aad Mac, waxaad heli doontaa interface ah soo socda. Waxaad ka arki kartaa qaabab 3 kabashada tilmaamaha ku yaal.
Si aad u soo kabsado taabanaysa isu-diridda lumay ama la tirtiro on Mac, ha la qaado "lumay Recovery File" mode sida isku day ah oo hore.
Tallaabada 2 Sawirka xijaab / mugga in taabanaysa isu-diridda lumay ka
Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan xijaab / mugga in taabanaysa isu-diridda lumay ka oo guji "Scan" ay soo baadhaan.
Haddii aad taabanaysa isu-diridda lumay, maxaa yeelay formatting, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho Mac file-diridda
Waxaas oo dhan xogta laga helay xijaab in la soo daabici doonaa in uu furmo suuqa ka dib markii baar. Waxaad ka arki kartaa magacyada file furmo si aad u hubiso in aad taabanaysa isu-diridda laga badiyay la aan dib ula karo ama.
Haddii la helay, kaliya aad u baahan tahay in aad calaamad oo guji "Ladnaansho" button uu furmo suuqa inaan dib u badbaadin aad Mac.
Fiiro gaar ah: ku baryayaaye, ha badbaadiyo dib meesha uu asal ah si looga fogaado in xogta overwritten.
Cubase SX u Mac